विदेश जान भनेर घरबाट हिँडेकी कुमारी १ महिना देखि बेपत्ता ! - jagritikhabar.com
विदेश जान भनेर घरबाट हिँडेकी कुमारी १ महिना देखि बेपत्ता !
बर्दियाकी एक महिला १ महिना देखि बेपत्ता भएकी छिन् । जिल्लाको बढायताल गाउँपालिका वडा नं १ शान्तिपुरकी २७ वर्षीय कुमारी झुपा बुढा गत कार्तिक २७ गतेदेखि बेपत्ता भएको परिवारले जनाएको छ ।
घरबाट विदेश जान्छु भनी काठमाण्डौ हिँडेकी झुपा उक्त दिन देखि नै सम्पर्क विहिन भएको श्रीमान काली बहादुर मल्ल ठकुरीले जानकारी दिनुभयो । घरपरिवारमा राम्रै सम्बन्ध रहेको भएपनि एक्कासी कुमारीले विदेश जान्छु भनेर हिँडेदेखि सम्पर्क विहिन भएको ठकुरीले बताउनुभयो ।
उहाँको १७ वर्षीय एक छोरी र १५ वर्षीय छोरा रहेका छन् । बिहान ८ बजे घरको विना सल्लाह काठमाण्डौ गएकी कुमारी बेपत्ता भएपछि परिवार चिन्तामा परेको छ । साथी भाई आफन्त छरछिमेक सबैतिर खोजि गर्दा पनि कहीँ फेला नपरेको छोरी सन्ध्या मल्लले बताउनुभयो । बुढाले प्रयोग गर्दै आईरहेको दुईवटै सम्पर्क नम्बरमा फोन नलागेको उहाँको भनाई छ ।
श्रीमान कालीले खोज तलासका लागि जमुनी प्रहरी चौकीमा उजुरी समेत दिनुभएको छ । तर प्रहरीबाट पनि केही खबर नआएपछि थप चिन्ता थपिएको परिवारको भनाई छ । फोटोमा देखाईएको महिला कहिँकतै देखेमा वा भेटेमा नजिकैको प्रहरी कार्यालय अथवा श्रीमान काली बहादुर मल्लको सम्पर्क नम्बर ९८१२४७६१२८,छोरीको ९८१३०६९१६८ र सहयोगी चन्द्र बहादुर रानाको सम्पर्क नम्बर ९८६८५९८९३२ मा सम्पर्क गरिदिन परिवारले आग्रह गरेका छन् ।